Etu ị ga -esi amata onye na -ahụ ọnọdụ WhatsApp m zoro ezo | Nzukọ mkpanaka
Etu esi amata onye na-ahụ ọnọdụ WhatsApp m zoro ezo
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, anyị ahụla ka ndị ọrụ siri malite ịghọta nke ahụ nzuzo bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ ha na ha amalitela ime ihe, na -egbochi iru akwụkwọ ha, na -eji profaịlụ nkeonwe… ka naanị ezi ndị enyi na ezinụlọ ha mara ihe ha na -eme.
Akụkọ ndị a enyeghị aka na nke a, akụkọ Snapchat mebere na nke ndị ọzọ na -edegharị depụtaghachiri ya, n'agbanyeghị na Instagram bụ ihe ịga nke ọma na obere Twitter, nke ọrụ ya eruteghị otu afọ nke ndụ. WhatsApp nwekwara statuses nke ya, yabụ, ọ nweghị ụzọ isi gbanahụ omume ọma a.
1 Kedu ihe bụ ọnọdụ WhatsApp
2 Etu ị ga -esi amata onye hụla statuses WhatsApp anyị
2.1 Onye hụrụ ọkwa m
3 Onye hụla ọnọdụ nzuzo m
4 Ha na -ahụ ọnọdụ WhatsApp m mana ha apụtaghị
5 Etu ị ga -esi amachi ndị mmadụ nwere ike ịhụ statuses WhatsApp
Kedu ihe bụ ọnọdụ WhatsApp
Ọnọdụ WhatsApp, dị ka Akụkọ Instagram, bụ obere vidiyo ma ọ bụ onyonyo (gụnyere gifs) nwere faịlụ 30 sekọnd kacha nke dị site na ngwa izi ozi n'etiti ndị niile nwere nọmba ekwentị anyị, ọ dịghị mkpa na anyị bidoro mkparịta ụka site na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka nzuzo, o doro anya na anyị enweghị ike ikwu maka WhatsApp, ikpo okwu nke, dị ka Instagram na Facebook, dabere na ịnye nhọrọ ka ndị ọrụ nwere ike mejuo ọchịchọ ịmata ihe ha n'echebughị echiche banyere onye a na -atụ anya, ya bụ, onye a na -emebi nzuzo ya.
Ọ bara uru na WhatsApp, dị ka nyiwe Facebook ndị ọzọ, na -enye anyị ohere ịtọ profaịlụ nkeonwe ka onye ọ bụla ghara ịchọgharị profaịlụ anyị, mana Ọ bụ nhọrọ onye ọrụ ga -arụ ọrụ nakwa na n'ọtụtụ oge ọ maghịdị na ọ dị.
Etu ị ga -esi amata onye hụla statuses WhatsApp anyị
Dịka m kwuru n'elu, onye ọ bụla nwere nọmba ekwentị anyị echekwara n'akwụkwọ ndekọ ekwentị, nwere ohere ịbanye na steeti WhatsApp na anyị na -ebipụta n'elu ikpo okwu a, ọ bụrụgodi na anyị ebidobeghị ntọghata ma ọ bụ anyị enweghị nọmba ekwentị gị n'ime akwụkwọ ndekọ ekwentị.
Mgbe WhatsApp malitere igosipụta statuses na ngwa ya, o mere ya na n'elu nkata. Ọ dabara nke ọma, ka oge gafere, WhatsApp ghọtara na ọ bụ echiche jọgburu onwe ya wee mepụta taabụ ọhụrụ akpọrọ Steeti wee tinye ya n'ọnọdụ mbụ.
N'ime ngalaba steeti, egosiri steeti niile (ọ dịtụghị mma kwuru) na ndị ọrụ, ndị anyị debere nọmba ekwentị na ekwentị anyị, ebipụtala n'elu ikpo okwu a.
WhatsApp, dị ka Instagram na Facebook, na -enye anyị ohere ịmata onye n'ime kọntaktị anyị debere n'akwụkwọ ekwentị nke ọnụ anyị. ahụla steeti anyị. Gịnị bụ ihe a?
Naanị ike ọrụ a nwere bụ mejuo ọchịchọ ịmata ndị ọrụ ndị na -ebipụta ha wee nwee ike jupụta ego ha. Maka ndị ọzọ, ndị na -achọghị ịma maka ego, ọ na -enye ha ohere ịmata ndị enyi ezinụlọ na -eso steeti ha.
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ha ahụ na onye ezinaụlọ akwụsịla ịhụ ọkwa ha, ha nwere ike ịpị ya ka ọ mara ma ihe niile adịla mma. Ọ naghị ewute gị ichegbu onwe anyị maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi site n'oge ruo n'oge na -akpọ ekwentị, na ọ bụghị naanị ndị WhatsApp na -ebi.
Onye hụrụ ọkwa m
para lee onye hụla ọnọdụ WhatsApp anyị Anyị ga -emerịrị ihe m ga -egosi n'okpuru.
Nke mbụ, banye na taabụ Mba.
Mgbe ah ka anyị mee ncha na steeti anyị ọ ga -egwukwa egwu.
N'okpuru, nke ahụ ga -egosi anya nwere ọnụọgụ. Ọnụọgụgụ ahụ nọchiri anya ọnụọgụ ndị lere steeti anyị.
Naanị n'elu, ọ na -egosi fakụ elu. Mgbe ị sere akụ ahụ elu, a ga -egosipụta kọntaktị niile ọnọdụ anyị hụla.
Onye hụla ọnọdụ nzuzo m
Ọ nweghị ụzọ ị ga -esi nweta ọnọdụ zoro ezo, onweghi. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ejighị nzuzo Facebook mara ndị otu, ha abụghị ndị nzuzu ma ọ bụrụ na onye ọrụ zochie ọnọdụ ha n'aka ndị ọzọ, ọ bụ ka ọ bụrụ naanị ndị ha chọrọ nwere ike ịnweta, ọ bụghị naanị onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ndị ọrụ ga -ahapụ ikpo okwu na / ma ọ bụ kwụsị iji statuses WhatsApp. Otu ihe ahụ na -eme na statuses nke Instagram na Facebook.
Na Ụlọ Ahịa Google yana site n'oge ruo n'oge na Apple App Store, ngwa pụtara na na nkọwa ha na -ekwu na ha na -enye anyị ohere ịnweta steeti zoro ezo nke WhatsAppAgbanyeghị, ozugbo anyị budatara ngwa ahụ, ọrụ ahụ apụtaghị na mberede.
Otu ihe ahụ na -eme na ibe ịntanetị na -emekwa ka obi sie anyị ike na anyị nwere ike ịnweta steeti WhatsApp zoro ezo. Enweghị ibe weebụ nke na -enye ohere ịrụ ọrụ a, ebe ọ ga -abụ nnukwu ntụpọ nchekwa WhatsApp nke ga -etinye ajụjụ echeburu na nchekwa ya.
Weebụsaịtị ndị a, naanị ihe ha chọrọ bụ ka ha jide ya nkọwa kaadị akwụmụgwọ ka, dị ka ha na -ekwu, gbaa mbọ hụ na anyị gafere afọ 18, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ afọ kacha nta iji jiri ikpo okwu a. Ekwesịrị icheta na iji WhatsApp, afọ kacha nta bụ afọ 13, dị ka Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ...
Ha na -ahụ ọnọdụ WhatsApp m mana ha apụtaghị
WhatsApp na -enye atụmatụ na -enye ndị ọrụ ohere egosighi nkwenye agụpụtara na ozi anyị na -enweta, yabụ na anyị enweghị ike ịma ma onye ọrụ ahụ agụọla ha n'ezie.
A na -ejikarị nke a eme ihe mgbe niile ka ndị ọrụ na -enweghị ndidi, ghara ịdị na -aga n'ihuna -achọ azịza nye ajụjụ nke ọ nwere ike anyị agụbeghị.
Akwụkwọ ozi nnata a na -emetụta ọnọdụ WhatsApp. N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na mmadụ agbanyụọ nhọrọ ndị a, ha nwere ike ịhụ ọnọdụ anyị na -ahapụghị akara na akụkọ ihe mere eme nke nlele ọnọdụ anyị.
Mgbe ọnụ ọgụgụ nlele adabaghị na ndị hụrụ ọkwa anyị, ọ bụ ihe doro anya na anyị na -eche ụdị ọnọdụ a ihu.
Etu ị ga -esi amachi ndị mmadụ nwere ike ịhụ statuses WhatsApp
Iji kpachie oke ngosipụta nke steeti anyị, anyị ga -enwerịrị Nhọrọ nzuzo WhatsApp, site na bọtịnụ Ntọala wee banye ngalaba States.
N'ime steeti, a na -egosipụta nhọrọ 3:
Ndị ana-akpọ m: Ndị kọntaktị anyị niile ga -enwe ohere lelee steeti anyị.
Ndị kọntaktị m belụsọ: Ndị kọntaktị anyị niile ga -enwe ohere lelee Steeti anyị belụsọ kọntaktị anyị tinye na ngalaba a.
Naanị soro: Site na nhọrọ a, anyị ga -ejedebe naanị steeti WhatsApp anyị naanị ndị anyị họrọ na ngalaba a.
Mgbanwe anyị na -eme na steeti ngosipụta WhatsApp ha agaghị emetụta ọnọdụ nke anyị bipụtara na mbụ. Nke a agaghị amanye anyị ka anyị hichapụ statuses ka dị ma kwụsịkwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibelata oke ha.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere ike ijedebe naanị anyị chere ka ọ kpochapụ na akpaghị aka. Ọkwa ọzọ anyị na -ebipụta ga -ejedebe naanị maka ndị na -ege ntị nke anyị debere na ntọala nzuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » WhatsApp » Etu esi amata onye na-ahụ ọnọdụ WhatsApp m zoro ezo
Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka ya
Roblox avatars: otu esi enweta ọtụtụ agba na avatars ọhụrụ